पशुपतिको ब्रम्हनाल, एक र दुई नम्बर चिता सार्नु गलत छ, यसले अनिस्ट हुन्छ : सांसद बैद्य – Gundruk Khabar
पशुपतिको ब्रम्हनाल, एक र दुई नम्बर चिता सार्नु गलत छ, यसले अनिस्ट हुन्छ : सांसद बैद्य
in Featured News II, संस्कृति
काठमाडौं, १६ साउन । विश्व सम्पदा सुचिमा रहेको पशुपति क्षेत्रको प्राचिनता र मौलिकता मास्न अगाडी सारिएको गुरुयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेशमामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले दोहोरो भूमिका खेलेको पाईएको छ।
विश्वका हिन्दुहरुको आराध्यदेव पशुपतिनाथ क्षेत्रको प्राचिन स्वरूप र मौलिकता बिगार्ने गरि पशुपति क्षेत्र विकाश कोष मार्फत आएको उक्त योजनामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका डा. भट्टराईले स्थानीयबासीले विरोध गरेपछि भने स्थानीयको हो मा हो मिलाएर उक्त योजनाको विरोधमा उत्रिएका हुन्।
सरकारले नै नियुक्त गरेका पशुपति विकास कोषका संचालक तथा पदाधिकारीले बनाएको गुरुयोजनाले पशुपतिको मौलिकतामाथि उथलपुथल पार्न खोजेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। पवित्र पशुपत क्षेत्रको प्राचिनता र मौलिकता मास्न नदिने भन्दै स्थानीयले कोष विरुद्द विरोध चर्काएका हुन्।
तर, कोषले भने पशुपति वरिपरिको बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव गरिएकोमा स्थानीयवासीले विरोध गरेको दावी गरेको छ। कोषका अनुसार स्थानीयले आफूहरु त्यहाँबाट हट्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले विरोध गरेको बताएको हो। कोषले आफ्नो गतिविधि सही रहेको दावी समेत गरेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकाश कोषमा सरकारले छानेका कोषका पदाधिकारी रहने गर्दछन। कोषका कार्यकारी निर्देशक, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई सबै नेकपाका छन्।
त्यसैगरी, पदाधिकारी र संचालकको नियुक्ती मन्त्रीपरिषद र मन्त्रीले गर्ने गर्दछन्। नेकपाकै सिफारिसमा नियुक्त भएकाहरुले जनविरोधी गुरुयोजना अघि सारेपछि राजन भट्टराई रक्षात्मक बनेको नेकपाकै एक नेताले गुन्द्रुक खबरला बताए।
त्यसो त, गुठी विधेयकमा जस्तै नयाँ गुरुयोजनाको विरोधमा विरोधमा सशक्त रुपमा उत्रिएपछि मात्र आफ्नो साख जोगाउन डा. भट्टराई स्थानियको साथमा रहेको दखाउन लागिपरेको पशुपति क्षेत्रका एक स्थानीय बताउँछन्।
उनि भन्छन्, ‘भट्टराईलाई स्थानियको चासो हुन्थ्यो भने उनले किन जनविरोधी र परम्परा बिरोधी गुरुयोजना शुरुमै रोक्न पहल गरेनन्?’ स्थानियले डा. भट्टराईलाई प्रश्न गरेका छन्।
कोषको उक्त कार्यको सामाजिक संजालमा उनको चर्को विरोध भइरहेको छ। सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले कोषको साथै उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका भट्टराईको दोहोरो चरित्रप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले डा. भट्टराई आफु राम्रो देखिनाकालागी मात्र कोषको विरोध गरे जस्तो गरको भन्दै ट्टराईजीहरु आफै बोक्सी आफै धामी हुनुको अर्थ नभएको बताएका छन्।
प्रदेश सांसद वैद्यले भने, ‘पशुपतिको विषयमा उहाँहरु आन्दोलनमा संगै जान सकेन भने आगामी चुनावमा जान नसक्ने भएर वाध्य भएर सहभागी भएको हो। यो नाटक बुझ्नै नसकिने भयो। भट्टराईजीहरु आफै बोक्सी आफै धामी हुनुभो।’
बैद्यका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमोदन गरेर क्याबिनेटमा पठाएको भएपनि त्यस योजनामा डिपीआर समेत नभएको बताए। उनका अनुसार गुरु योजनाकालागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नभएकाले कोषको त्यो गुरुयोजना नै नभएको दावी समेत गरेका छन्।
उनले भने, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमोदन गरेर क्याबिनेटमा पठाएको थियो। यसमा डिपीआर पनि छैन। आवश्यक पर्ने पूर्वाधार पनि छैन। यो गुरुयोजना नै हैन। क्याबिनेटमै पठाएका बेलामा संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले राष्ट्रिय हित र स्थानियको भावना समेटेर गुरुयोजना बनाउन निर्देशन गरेको छ।’
सरोकारवालाको सुझाव राखेर अगाडि बढ्नु भनेर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको भएपनि सरोकारवालालाई बेवास्ता गरिएको बैद्यको भनाई छ।
सांसद वैद्यले भने, ‘संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि राष्ट्रिय हित हुने गरी सरोकारवालाको सुझाव राखेर अगाडि बढ्नु भनेको छ। यो गुरुयोजना अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने अनर्थ हुन्छ। पशुपतिको गेट सार्ने, ब्रम्हनाल सार्ने, एक नम्बर र दुई नम्बर चिता सार्ने जस्ता योजना अगाडि सारिएको छ। यो गलत हो। अनिस्ट हुन्छ।’
राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिएको स्मरण गर्दै प्रतिनिधिसभा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले गुरुयोजनाको नाममाा स्थानीय नेवारलाई विस्थापित गरेर पशुपतिमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।
कोषले गत फागुनमै गुरुयोजना पास गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। तर, संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको केही दिन अघि बसेको बैठकले गुरुयोजनालाई जस्ताको त्यस्तै पास नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त गुरुयोजना बारेमा सरोकारवाला र स्थानीयबासीहरुसँग छलफल गरी उनीहरुको राय सल्लाहसमेत लिएर परिमार्जन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
केपी ओली नेपालको ४२औं प्रधानमन्त्री नियुक्त, आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिंदै
बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना लगभग सकियो, नयाँ सरकार बनाउन देउवा असफल
अक्सिजन अभाव : उपत्यकाका १० वटा अस्पतालले भने – ‘विरामीको उपचार गर्न असमर्थ छौं’
नेपाल समुहको नयाँ दलको खाका तयार – अध्यक्षमा माधव र बामदेव, चुनाव चिन्ह सुर्य भित्र पाँचवटा तारा